Shahid Kapoor Iyo Mira Rajput Oo Guri Cusub Ka Iibsanayaan Magaalada Mumbai - Hablaha Media Network
Shahid Kapoor Iyo Mira Rajput Oo Guri Cusub Ka Iibsanayaan Magaalada Mumbai
HMN:- Lamaanaha caanka ah ee Bollywood-ka laga jecel yahay Shahid Kapoor iyo xaaskiisa Mira Rajput ayaa la sheegay inay guri cusub iibsagiisa ku guda jiraan.
Sida shabakada Spot Boye qoreyso Shahid Kapoor iyo Mira Rajput ayaa guri cusub ka iibsanayaan xaafada Bandra oo Mumbai ka tirsan waxaana la sheegay in guri weyn ay iibsanayaan.
Shahid iyo Mira haatan waxay ku nool yihiin guri ku yaalo xaafada xeebeedka Juhi oo isla Mumbai ka tirsan oo ay dagnaayeen labadii sano ee ugu dambeesay.
Shahid Kapoor guriga Juhi ku yaalo isaga ayaa iibsaday oo iska guriga Juhi ku yaalo sanadii 2014 hadana wuxuu doonayaa in guriga cusub ee Bandra ka iibin doono inuu xaaskiisa Mira Rajput hadiyad ahaan u siiyo.
Sidoo kale Spot Boye waxay sheegtay dhismaha cusub oo ay Shahid iyo Mira iibsanayaan in qiimo ahaan ku fadhiyo 28 Crore ($4.24M).
Lama sheegin in Shahid iyo Mira guriga cusub oo ay iibsanayaan inay dagi doonaan iyo inay maal gashi kale ka sameyn doonan arimo ganacsi la xariiro.